Mareykanka oo si rasmi ah uga baxay Hay’ada Caafimaadka Adduunka | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo si rasmi ah uga baxay Hay’ada Caafimaadka Adduunka
Maamulka Madaxweyne Trump wuxuu si rasmi ah u oggeeysiiyay Qaramada Midoobay ka bixintaankiisa Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, inkasta oo uu ka bixitaanku uusan dhaqan-gali doonin ilaa sannadka soo socda, taasi oo la micno ah in laga laaban karo haddii uu yimaado maamul cusub ama duruufuhu isbedelaan.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ah musharraxa Madaxweynaha Xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in go’aankaasi uu ka laaban dooo maalinta ugu horreysa ee uu xafiiska la wareego haddii la doorto.
Oggeysiinta QM ee ka bixitaanka WHO wuxuu daba joogaa ballan-qaad hore oo uu sameeeyay Madaxweyne Trump oo isagu kal hore aad uga soo horjeeday hannaana ay Hay’adda Caafimaadka Adduunka u maareysay COVID-19 isagoona ku eedeeyay in ay wax ka maqasho dowladda Shiinaha.
Tallaabada uu ku dhaqaaqay maamulka Trump durbadiiba waxaa dhaleeceeyay saraakiisha Caafimaadka iyo kuwa dhaleeceeya maamulka Trump oo ay ku jiraan tiro badan oo Dimuqraadiyiin ah waxayna ku tilmaameen mid saameyn xooggan ku yeelata sumacadda Mareykanka.
Waaxda Arrimaha Dibadda mareykanka ayaa sheegtay in ay sii wadeyso dib u habeynta xiriirka WHO iyo Mareykanka, balse waxaa horay u jiray hadal uu Trump sheegay kaas oo ahaa haddii uu bedelayo go’aankiisa wuxuuna yiri “Dib uguma fiirsanayo ilaa ay dhaqankooda u bedelaan mid wadajir ah, balse uma maleynayo in ay sidaasi sameynayaan”.
Xog-hayaha guud ee QM Guterres oo cuskanaya dastuurka WHO ee 1946 ayaa yiri “ waaxay u baahantahy xaqiijin in dhammaan shuurudaha ka bixintaanka la buuxiyo”.
Xubnaha Xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhammaantood waxaa ay ka soo horjeesteen go’aanka Madaxweyne Trump.
Next articleTaliska Booliska Oo War Kasoo Saaray Qaraxii Ka Dhacay Muqdisho